Fampidirana | Reef Resilience
Inona no atao hoe karbaona manga?
Ny karbaona manga dia manondro ny karbaona namboarina, voatahiry ary navoakan'ny tontolo iainana amoron-dranomasina sy an-dranomasina. Ny ekosistra karbonika manga amoron-dranomasina (ohatra, honko, honahona, ary ahidrano) dia mitana andraikitra lehibe amin'ny famandrihana sy fitehirizana ny karbaona maharitra, ka manampy amin'ny fihenan'ny fiovan'ny toetr'andro.
Ekosistemôdiôma manga (ambony hatrany ambany): ala honko, honahona ary ahidratsy any an-dranomasina. Loharano: Howard et al. 2017. Sarin-tsary etsy ambony ambany © Rachel Docherty / Flickr Creative Commons, Trond Larsen, Miguel Angel Mateo
Ekosistemôbroôma manga dia hita any amoron-dranomasina isaky ny kontinanta ary Antartika. Mitombo ny ala honko any amin'ny faritra mampitohy ny morontsiraka tropikaly sy subtropika, ny heniheny dia misy eny amin'ny morontsiraka hipetraka avy any amin'ny faritany arctic mankany amin'ireo tropika, na dia any amin'ny faritra mandefitra, ary ny ranomasina dia hita any amin'ny ranomasina amoron'ny kontinanta rehetra, afa-tsy Antarctica.
Fizarana manerantany momba ny tontolo iainana karbonika manga. Loharano: The Inisative karbona manga
Ireo ecosystems dia manala ny karbaona avy amin'ny atmosfera sy ny ranomasimbe, ary mitahiry izany ao amin'ny raviny, ny tongony, ny sampany, ny fakany ary ny fatran-tsakafo.
Ny karbona dia voatazona amin'ny alàlan'ny potosintesis (zana-tsipìka maitso) any amin'ny lemaka amoron-tsiraka izay ahalasa azy ho lasa biomassa sy tany (zana-tsipìka mena) na miverina amin'ny rivotra (arrow mainty). Loharano: novaina avy amin'i Howard et al. 2017
Amin'ny lafiny iray, ireto tontolo iainana ireto dia milentika karbonika mahomby kokoa noho ny ala terestrialy indrindra (Mcleod et al. 2011, Pan et al. 2011, Ny sary eto ambany).
Ny dikan'ny fihenan'ny karbaona lava (g C m – 2 yr-1) amin'ny tany any anaty ala terestrialy sy ny fanamboarana ny tontolo iainana an-dranomasina. Ny faran'ny hadisoana dia manondro ny habetsaky ny fanangonana be loatra. Mariho ny marika logarithmic ao amin'ny axis y. Loharano: Mcleod et al. 2011
Karazam-borona amin'ny alàlan'ny ala honko amin'ny ala honko. Loharano: Conservation International
Tsy toy ny tany amoron-dranomasina, ny fatran-tsolika miorina amin'ny tontolo voajanahary manga, dia anaerobic (tsy misy oksizenina). Noho izany dia mihalava be dia be ny karbonika ao anatin'ireo sedim-pitsarana ary afaka tahirizaina mandritra ny an'arivony taona maro. ref Ankoatr'izay, ny fahatsapana ambony ao anatin'ny rafitra karbonika manga maro dia mametra ny famokarana metana, gaona ao anaty trano maitso. ref Farany, tsy toy ny rafitra an-dranomasina sy ranomamy ny rafitra karbonika manga dia tsy mionona amin'ny karbaona satria ny fakan-drivotra dia mihamitombo avo roa heny noho ny fiakaran'ny ranomasina, rehefa mihazona ny fahasalaman'ny tontolo iainana. ref Noho izany, ny tahan'ny fikarakarana karbaona ao anaty sediment ary ny haben'ny fantsom-pandehan'ny karbaona dia mety hitombo hatrany. ref Ny dingana toy izany dia mampiseho ny anjara toerana manan-danja izay eken'ny tontolon'ny tontolo iainana karbonika amin'ny alàlan'ny fanalefahana (ny fitrandrahana karbônina) ary ny fampifanarahana (ny fiakarana mihetsika ho valin'ny fisondrotry ny ranomasina; ny faritra mandia dia mampihena ny angovo sy ny fiantraikan'ny fiakaran'ny ranomasina sy ny fiakaran'ny tafio-drivotra).
Na dia miteraka faritra kely kokoa aza ny fiompiana karbaona manga noho ny ala any an-tanety, ny fandraisan'izy ireo anjara amin'ny fitrandrahana karbaona maharitra maharitra dia mitovy amin'ny fitrandrahana karbaona amin'ny karazana fiompiana ety an-tany. Na dia eo aza ny biomass maneran-tany sy ny fandrakofana ny fiarovana ny karbaona manga, izy ireo dia manana ny fahafahana mandray anjara betsaka amin'ny fitrandrahana karbaona maharitra maharitra vokatry ny fihenan'ny karazam-borona bitika indrindra amin'ny sediment.
Na dia anisan'ireo tontolo voajanahary faran'izay betsaka aza izy ireo eto an-tany, dia atahorana ihany koa izy ireo. Raha vantany vao rava na rava izy ireo dia mety halefa any anaty atmosfera sy ranomasimbe ny karbôn voatahiry azy ary mety ho mpamily lehibe amin'ny fiovan'ny toetr'andro. ref Ohatra, rehefa lany ny fampiroboroboana ny tany mando, mikombom-bary ao amin'ny tany, izay atahorana amin'ny fiparitahan'ny riandrano, dia manimba ny karbaona ary mamoaka izany amin'ny rivotra amin'ny CO2. Ny tahan'ny fahaverezan'ny karbaona manga dia 0.7 - 7% isan-taona (miankina amin'ny karazana zavamaniry sy ny toerana misy azy), ka miteraka 0.23-2.25 mg CO ny CO2 navoaka. ref Noho izany, ny fiarovana, ny famerenana amin'ny laoniny, ary ny fampiasana maharitra ny tontolo iainana marefo dia tsy maintsy atao mba hahazoana antoka fa mitazona ny tombotsoa azo avy amin'ny karbaona izy ireo, ankoatra ireo tombontsoa fanampiny izay omen'izy ireo.
Ny tatitra vao navoaka farany, The State of the World Mangroves, dia manome ny vaovao farany momba izay fantatsika momba ny honko sy ny zavatra atao mba hanohanana ireo fonenana mahatalanjona ireo. misokatra amin'ny varavarankely vaovaoVakio ny tatitra sy ny famintinana Executive.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoBlue Carbon Initiative Library
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoBlue Carbon Coastal: Fampidirana ho an'ny mpanao politikamanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoBlue Carbon Factsheetmanokatra fisie PDF